Iindaba - Zithini iiFomu zoLungelelwaniso loMoya opholileyo
Zithini Iifom zoLungelelwaniso lomoya opholileyo
Ngokweemeko zokusebenza, umoya opholileyo unokwahlulwa ube ngumgaqo wesandla kunye nommiselo ozenzekelayo.
1) Imowudi yohlengahlengiso lwencwadana kukuhlengahlengisa iparameter yokusebenza kwefeni okanye ishutter ngokusebenza ngesandla, njengokuvula nokuvala ifeni okanye ukutshintsha i-angle blade ye-fan, isantya kunye ne-shutter angle angle yokuvula ukutshintsha ivolumu yomoya. Ukusetyenziswa ngokubanzi kukuhlengahlengiswa kwe-angle fan (ekwabizwa ngokuba yi-fan angle ye-angle) kunye ne-shutter yesandla. Uhlengahlengiso olwenziwe ngesandla lunezinto ezilula zezixhobo kunye nexabiso eliphantsi lokuvelisa. Kodwa umgangatho wokumisela uphantsi, awunakulungelelaniswa ngexesha, olungakulungelanga uzinzo lomgangatho (ophakathi) womgangatho. Kwangelo xesha, ayilulondolozi amandla omoya. Iimeko zokusebenza zihlwempuzeke kakhulu, isitshisi sinyuswa yityhubhu, iqondo lobushushu liphezulu kakhulu, indawo yokusebenza imxinwa, kwaye ixesha lokuvala lide kakhulu.
(2) Indlela yokuhlengahlengisa ivolumu yomoya yefeni kukutshintsha ivolumu yomoya yefeni ngokuzenzekelayo. Ezona zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ziifeni zokuhlengahlengisa ii-angle ezizenzekelayo kunye nezivalo ezizenzekelayo. Iiparamitha zokusebenza kwe fan okanye i-shutter zinokuhlengahlengiswa ngokukodwa okanye ngokudibeneyo. Nokuba yeyiphi na imo yohlengahlengiso, inokunxibelelana nenkqubo yolawulo lwesixhobo esizenzekelayo. Indlela yohlengahlengiso oluzenzekelayo inokunciphisa umthwalo wokulamla, igcine uzinzo ekusebenzeni, iphucule umgangatho wemveliso, iphucule iimeko zabasebenzi kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
Ukupholisa umoya luhlobo lwezixhobo ezisebenzisa umoya ojikeleze indawo njengokupholisa ukupholisa okanye ukudibanisa ulwelo lobushushu obuphezulu kumbhobho. Inezibonelelo zokungabikho komthombo wamanzi, efanelekileyo kubushushu obuphezulu kunye neemeko zenkqubo yoxinzelelo oluphezulu, ubomi benkonzo ende kunye neendleko zokusebenza eziphantsi. Ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zamanzi kunye namandla kunye nokuphuculwa kolwazi lokusingqongileyo, umoya opholileyo ngokugcina amanzi, ukonga umbane kunye nokungcoliseka kwendalo kuye kwasetyenziswa kakhulu, Uhlobo kunye nokusetyenziswa kohlobo lweplate yomoya opholileyo